दलका नेताहरुलाई खुलापत्र – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
दलका नेताहरुलाई खुलापत्र
२०७० माघ ८, बुधबार ०३:५६ गते
-राधाकृष्ण शर्मा (पौडेल)
नेपाली जनता शताब्दीयौँदेखि शोषण, उत्पीडनबाट छटपटाइरहेका थिए । सबै जनता अधिकारबाट वञ्चित थिए । उनीहरु राणाहरुको एकतन्त्रीय वादको क्रूर पञ्जाबाट उम्केर स्वतन्त्रताको स्वास फेर्ने अवसर खोज्न बाध्य भएका थिए । त्यो शासनपद्धतिलाई सिध्याउन जनताहरुको प्रयास भयो । त्यतिखेर पनि नेपाली जनता आफ्नो प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि ज्यानको बाजी लगाएर संघर्ष गरेका थिए र राणा शासनकालको अन्त्य गरेरै छाडेका थिए ।
लोकतन्त्रको नाउँमा शाहवंशको उदय भयो र शाहवंशले पनि २००७ सालबाट २०४६ सालसम्म किर्नो गाडिँदा झैँ गाडिएर ४० वर्षसम्म राजाहरुले राज्य गरे । २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म दलीय संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास पनि गरियो । १० वर्षका बीचमा हाम्रो देशमा राजनीतिक दलहरुले गद्दारी गर्नुको कारण राजतन्त्र सक्रिय हुँदै गयो भने राजनीतिक पार्टीहरु चिराचिरा भएर नयाँ पार्टी तथा दल खोज्न सुरू गरे ।
एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न नसक्नुको कारणमा हरेक दलका नेताहरुले मीठामीठा भाषण गर्ने, सोझासाझा जनताहरुलाई झुक्याउने, छलकपट दिने चरित्रका नेताहरु परेका हुनाले हो । सर्वहारा श्रमजीवी जनताप्रति कुनै वास्ता नगर्ने यस्ता दलका नेताहरुबाट जनता चिढिएका थिए । जनतालाई भ¥याङ बनाएर राजनीतिक पार्टीको शिखरमा पुगेका नेताहरुबाट भाषण, शासन चाहिन्छ भन्ने नेताहरुलाई टिकाइराख्ने भरौटे टट्टुहरुलाई कोटा, ठेक्कापट्टा दिँदामा पुग्छ ।
तर अहिले जनताहरु सहितको रगतमा नेताहरु पौडी खेलेको देख्दा जनता चूर भएका छन् । नीच, स्वार्थी दलहरु भने आफ्नो प्रभुत्व जमाइराख्नका लागि चाहिने पैसा जुटाउन विदेशी शक्तिहरुको सामु घुँडा टेकी हात फैलाउनेसम्म पनि पछि पर्दैनन् । त्यतिमात्र हैन, राजनीतिमा जसको इतिहास छैन त्यस्तो व्यक्तिलाई करोडौँ रूपियाँ लिई सभासद् बनाउन पछि पर्दैनन् भने यस्ता नेताले हाम्रो देश नेपालमा जनमुखी संविधान बनाउलान् र ? यस्ता दलका नेताहरुको घृणित व्यवहारले गर्दा देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता एवं अखण्डता नै खतरामा पर्ने त होइन ? भन्ने संकेत देखिन्छ ।
२०६९÷२०७० मा आइपुग्दा साम्राज्यवादीका नाइके अतिवादी शक्तिले नागरिक सर्वोच्चताको नाउँमा समाजमा जातीय नारा लगाउँदै समाजलाई टुक्राई देशमा अस्थिरता ल्याई मुलुकलाई संविधानको नाउँमा सरकारको आयु लम्ब्याउँदै राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउन सफल भए । दिनभर सडकमा भाषण, रातभर पाँचतारे होटल र क्यासिनो कहाँ छन् भन्दै हिँड्ने राजनीतिक नेताहरुले मुलुकलाई जनमुखी संविधान देलान् ?
विकासको त कुरा छाडौँ, संसारको कुनै देशमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको इतिहास छैन । तर, हाम्रो देशमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको ६० दिनभन्दा बढी नाघिसक्यो । मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस आफैँमा विवादास्पद छ । आपसमा खितातानी र रडाकोमा छन् दलहरु । त्यो देखेर अन्य दलहरुले प्रधानमन्त्री पदका लागि ¥याल चुहाइराखेका छन् ।
निर्वाचनअगाडि अर्धमोही किसान, गरिब किसान, साना दस्तकार, पसलकार, कामदार, साना खुद्रा पसलेहरु, कृषि मजदुर, गरिब, अशिक्षित जनतालाई मीठा भाषण, उग्र नारा र झूठा घोषणापत्र बाँडेर जनतालाई धोका दिँदै सभासद् बनिसकेपछि आफ्नै नातागोतालाई समानुपातिक सभासद् बनाउने, गुट÷उपगुट बनाई अगाडि बढ्न खोज्ने नेताहरुलाई कार्यकर्ताहरुले राम्रोसँग हेरिरहेका छन् । २०४ वर्षे राणा शासनकाल र ३० वर्षे राजतन्त्र ढाल्ने नेपाली जनताले भोलि विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन् ।